မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၀ ဦးတင်ဆောင်လာတဲ့ ကား တိမ်းမှောက် ၄ ဦးသေဆုံး - Real News
Home Local News မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၀ ဦးတင်ဆောင်လာတဲ့ ကား တိမ်းမှောက် ၄ ဦးသေဆုံး
မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၀ ဦးတင်ဆောင်လာတဲ့ ကား တိမ်းမှောက် ၄ ဦးသေဆုံး
ယနေ့၁၉.၅.၂၀၁၉ရက်နေ့နံနက်တွင် မြန်မာနိူင်ငံသား (၁၀)ဦးကျော်ခန့်သယ်ဆောင်လာသည့် ကားတစ်စီး
မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၉၀ကျော်ဟိုက်ဝေးလမ်းမပေါ်တွင် တိမ်းမှောက်သဖြင့် လူလေးဦးသေဆုံးကြောင်းကြားသိရသည့်အတွက်
ကူညီမှူပေးနိူင်ရန် မလေးရှားနိူင်ငံ မြန်မာသံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါလျက်အခင်းဖြစ်နေရာသို့ သွားရောက်နေပါသည်။
ဒီကနေ့မနက်(၁၉.၅.၂၀၁၉) ၇ နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာ ပီနန်း မှ kl သို့အသွား(မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၉၀.၈) မှာ လူ၁၄ ယောက်တင်လာတဲ့ အောက်လမ်းပွဲစားကားတစီးတိန်းမှောက်ပီး ကားအနောက်ခြမ်းတခုလုံးစုတ်ပြတ်ပီး တချို့ တံတားအောက်သို့လွင့်စင်သွားတယ် လက်ရှိမှာ ၃ ဦးပွဲချင်းပီးသေပီး အောက်သို့လွင့်သွားသူများ အသက်ရှင်ဖို့မသေချာ ကားသမားမှာပျောက်ဆုံးနေပီး ယောက်ျားလေး ၁၁ယောက် မိန်းခလေး ၁ ဖြစ်ကာ အားလုံးချင်းလူမျိုးများဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်…
လက်ရှိမှာ တော့ ခရီးသွား ကိုမင်းသန်းက ဓာတ်ပုံနဲ့သတင်းရယူထားပီး သံရုံး နဲ့ချိတ်ဆက်က ကပုန်းနာရေးအသင်းက အခင်းဖြစ်ရာနေရာသို့သွားနေပီဟုသိရပါတယ်….
သနားစရာ ကောင်းပါတယ် တချို့ဆို မြန်မာစကားတောင်မပြောတက်… မိဘတွေတော့ရင်ကွဲပီး စိတ်ပူနေရောပေါ့ ချင်းပွဲစားလို့တော့ပြောပီး နာမည်ကိုတောင်မပြောနိုင်ကြ သူတို့က ဖုန်းနံပါတ် လေးတော့ပေးရှာပါတယ်
မလေးရှားမှာ တို့မြန်မာတွေ ခေါတ်ပျက်ပီဆို တခုခုတော့ဖောက်ကြပြန်ပီ…အဲ့လိုကားကို ကားသမားအပါအဝင် ၁၄ ယောက်တင်ပီးမောင်းသတဲ့ လောဘသားကောင်တွေလုပ်ကြပေါ့
ပွဲစားဖုန်းနံပါတ်က 017 5777 991 တဲ့…
မွနျမာနိုငျငံသား ၁၀ ဦးတငျဆောငျလာသောကား တိမျးမှောကျ ၄ ဦးသဆေုံး
ယနေ့၁၉.၅.၂၀၁၉ရကျနနေံ့နကျတှငျ မွနျမာနိူငျငံသား (၁၀)ဦးကြျောခနျ့သယျဆောငျလာသညျ့ ကားတဈစီး
မိုငျတိုငျအမှတျ ၁၉၀ကြျောဟိုကျဝေးလမျးမပျေါတှငျ တိမျးမှောကျသဖွငျ့ လူလေးဦးသဆေုံးကွောငျးကွားသိရသညျ့အတှကျ
ကူညီမှူပေးနိူငျရနျ မလေးရှားနိူငျငံ မွနျမာသံရုံးမှ တာဝနျရှိသူမြား လိုကျပါလကျြအခငျးဖွဈနရောသို့ သှားရောကျနပေါသညျ။
ဒီကနမေ့နကျ(၁၉.၅.၂၀၁၉) ၇ နာရီဝနျးကငျြလောကျမှာ ပီနနျး မှ kl သို့အသှား(မိုငျတိုငျအမှတျ ၁၉၀.၈) မှာ လူ၁၄ ယောကျတငျလာတဲ့ အောကျလမျးပှဲစားကားတစီးတိနျးမှောကျပီး ကားအနောကျခွမျးတခုလုံးစုတျပွတျပီး တခြို့ တံတားအောကျသို့လှငျ့စငျသှားတယျ လကျရှိမှာ ၃ ဦးပှဲခငျြးပီးသပေီး အောကျသို့လှငျ့သှားသူမြား အသကျရှငျဖို့မသခြော ကားသမားမှာပြောကျဆုံးနပေီး ယောကျြားလေး ၁၁ယောကျ မိနျးခလေး ၁ ဖွဈကာ အားလုံးခငျြးလူမြိုးမြားဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ…
လကျရှိမှာ တော့ ခရီးသှား ကိုမငျးသနျးက ဓာတျပုံနဲ့သတငျးရယူထားပီး သံရုံး နဲ့ခြိတျဆကျက ကပုနျးနာရေးအသငျးက အခငျးဖွဈရာနရောသို့သှားနပေီဟုသိရပါတယျ….
သနားစရာ ကောငျးပါတယျ တခြို့ဆို မွနျမာစကားတောငျမပွောတကျ… မိဘတှတေော့ရငျကှဲပီး စိတျပူနရေောပေါ့ ခငျြးပှဲစားလို့တော့ပွောပီး နာမညျကိုတောငျမပွောနိုငျကွ သူတို့က ဖုနျးနံပါတျ လေးတော့ပေးရှာပါတယျ
မလေးရှားမှာ တို့မွနျမာတှေ ခေါတျပကျြပီဆို တခုခုတော့ဖောကျကွပွနျပီ…အဲ့လိုကားကို ကားသမားအပါအဝငျ ၁၄ ယောကျတငျပီးမောငျးသတဲ့ လောဘသားကောငျတှလေုပျကွပေါ့
ပှဲစားဖုနျးနံပါတျက 017 5777 991 တဲ့…
Previous articleနေအိမ်ထဲဝင်ပြီး အနုကြမ်းစီးကာ ငွေကြေးနဲ့ ရွှေထည်ယူဆောင်သွားသူကို ဖမ်းဆီးရမိ
Next articleအဖေတူအမေကွဲအစ်ကို မှ ညီမဖြစ်သူကို သားမယား အကြိမ်ကြိမ်ပြုကျင့်
Line Walker အဖွဲ့သားတွေ နောင်တေ တွနဲ့ ပြန်သွားတယ်လို့ပြောကြတဲ့ အပေါ်လင်းအောင်ခေတ် ပြန်ပြော
​တော်​လိုက်​တဲ့ မိဘဗျာ ဒီ​နေ့မနက်​ fb​ပေါ်မှာ အကြိုက်​ဆုံး ပုံလေးပါဗျ
အာပုပ်ဆော် နံတာ၊ သွား မှာကျောက်တည်တာ နဲ့ သွားချိုး (ဂျိုး) တက်တာတွေကို ပျောက်ကင်းနိုင်စေမဲ့ သဘာဝသွားတိုက်ဆေး
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အဆင်ပြေနေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ပြောပြခဲ့တဲ့ ပြေတီဦး
ပုဇွန်တောင် တည်းခိုခန်းတွင် လူသတ်မှု တရားခံဆိုသူ အမျိုးသမီးကိုဖမ်းမိ
လက်နက်ကြီး ကျည်ကျပြီ လူပေါင်း ၄၀ ကျော် ကြာညိုပြင်ရွာသို့ ထွက်ပြေး